Fanairana momba ny dia: Ny firenena Afrikana Atsinanana dia mamoaka fampandrenesana momba ny valan'aretina Ebola mahafaty
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanairana momba ny dia: Ny firenena Afrikana Atsinanana dia mamoaka fampandrenesana momba ny valan'aretina Ebola mahafaty
Enga anie 15, 2018
Ireo fanjakana afrikanina atsinanana manamorona ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC) dia namoaka fampandrenesana fampitandremana mponina, mpivahiny sy mpitsidika izay miantso ny faritra mba hanao fitandremana mafy noho ny fihanaky ny viriosy Ebola mahafaty sy mikraoba izay vao notaterina tany Bikoro, Faritany Equateur ao amin'ny Demokratika. Repoblikan'i Kongo.
Ny aretina dia nahafaty olona 17 tany Congo dimy andro lasa izay. Matetika ny Ebola dia mahafaty raha tsy voatsabo ary manana tahan'ny maty manodidina ny 50 isan-jato raha ny filazan'ny World Health Organization.
Nilaza ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana fa ny virus Ebola mahafaty dia mifindra amin'ny olona amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana amin'ireo biby dia ary miely amin'ny alàlan'ny fifindran'ny olombelona.
Ny viriosy Ebola mahafaty dia notaterina voalohany tany amin'ireo firenena afrikanina akaikin'ny reniranon'i Congo tamin'ny 1976 fa ny tranga matotra kosa dia notaterina tato anatin'ny taona vitsivitsy taorian'ny nahafatesana olona maro.
Voaozona tamin'ny ady an-trano, Repoblika Demokratikan'i Kongo dia voalaza fa niavian'ny virus mahafaty Ebola izay nalaina avy amin'ny primata avy eo niparitaka tamin'ny olombelona. Ny vahoaka kongoley dia mihaza gorila, chimpanzees ary gidro ho hena anaty ala.
Tanzania sy ireo firenena hafa any Afrika manamorona ny Repoblikan'i Kongo dia nametraka indray ny fizahana mahazatra ny mpandeha rehetra amin'ny toerana fidirana ary nampitandrina ny olom-pirenena mba ho mailo.
Ny risika amin'ny fahasalamam-bahoaka manerana ny faritra Afrikana Atsinanana dia mijanona ho avo tsy noho ny fahalemena anatiny ao amin'ny rafi-pitsaboana any Kongo izay rotiky ny ady ka misy virus io, fa koa ny toetr'ireo faritany marefo.
Ny minisitry ny fahasalamana tanzaniana Ummy Mwalimu dia nanao fampandrenesana ho an'ireo olona monina amin'ny faritra manamorona an'i Kongo, ary nilaza fa manara-maso ny fironana Ebola ny governemanta Tanzaniana amin'ny fitandremana fatratra mba tsy hisy ny fihanaky ny aretina manerana ny sisintany.
Ny minisitry ny fahasalamana Kenyan, Sisily Kariuki dia nilaza fa ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana dia naparitaka tamin'ny teboka rehetra amin'ny sisin-tany mba hijerena ireo mpandeha rehetra miditra amin'ny firenena Afrikana Atsinanana ny mety ho soritr'aretin'ny virus Ebola.
Nilaza izy fa ny governemanta Kenya dia nanangana ny filankevi-pirenena momba ny vonjy taitra ho an'ny fahasalamana, notendrena hisorohana ny fihanaky ny viriosy Ebola mahafaty ao amin'ity firenena zaridaina afrikanina ity.
Na dia tsy misy atahorana be aza izany raha oharina amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy, Kenya dia manana hetsi-panoherana lehibe avy any Kongo amin'ny alàlan'ny sisintany fidirana ao Busia sy Malaba miampita ny sisintanin'i Oganda.
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Jomo Kenyatta no fidirana be mpandeha indrindra ho an'ny mpandeha avy any Kongo izay misy ny sidina Kenya Airways eo anelanelan'ny Nairobi sy Lubumbashi.
Lubumbashi no tanàna lehibe indrindra faharoa any Kongo fantatra amin'ny anarana hoe renivohitra fitrandrahana izay mpampiantrano an'ireo orinasa mpitrandraka lehibe indrindra.
Tao anatin'ny dimy herinandro lasa dia 21 ny olona ahiahiana ho mararin'ny hemorrhagic virus sy ny faritra Ikoko Iponge any Kongo izay misy 17 ny maty. Ny valan'aretina Ebola farany nitranga dia nitranga tany 2017 tany amin'ny faritra ara-pahasalamana Likati, faritanin'i Bas Uele, any amin'ny faritra avaratry ny firenena ary voafehy haingana.
Tamin'ny 2014, olona maherin'ny 11,300 ny ankamaroan'ny olona any Guinea, Sierra Leone ary Liberia no novonoina tamin'ny valan'aretina Ebola ratsy indrindra, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny sehatry ny fizahan-tany any Afrika satria nofoanan'ireo mpandeha ny dia lavitra notetezin'izy ireo tany amin'ny kaontinanta.
Ny fanjifana vokatra primatiora dia nisaina ho loharanon'ny valanaretina viriosy Ebola any amin'ireo firenena afrikanina manamorona ny Equator, any Kongo ny ankamaroany izay amonoana gorila, chimpanzees, baboons ary gidro mba hanomezana hena kirihitra.
Ny ala Kongo sy ny tontolo manodidina azy dia fonenan'ny primata izay nanjakan'ny ala tany Oganda, Rwanda, Burundi ary Tanzania Andrefana.
Gorillas sy Chimpanzees no biby manintona indrindra manintona mpizahatany an'arivony maro ho any Rwanda sy Oganda miaraka amin'ny fiarovana avo amin'ny governemanta amin'ny alàlan'ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny bibidia.
Ny famonoana primata, ny ankamaroan'ny gorila any Kongo noho ny henan'ala dia atosiky ny tsy fisian'ny fiarovan'ny governemanta raha jerena ireo ady an-trano nandrava ny firenena nandritra ny am-polony taona maro, hoy ny nomarihin'ireo mpiaro ny bibidia.
Valan'aretina Ebola mahafaty any Afrika Andrefana vao tsy ela akory izay dia voafehy taorian'ny famonoana olona maro.
Ny ONYX Hospitality Group dia manendry an'i Gen McKenzie ho filoha lefitra mpanatanteraky ny Human Resources
Mekong Forum momba ny fizahan-tany Mekong 2018 napetraka amin'ny volana ho avy: nisoratra anarana ve ianao?